Phenotype 002 Mgbaaka - Imewe Mmewe
Tiuzdee 31 Ọgọọst 2021
Mgbaaka Bradị Phenotype 002 mgbaaka bụ nsonazụ simulation dijitalụ na-eto. Ihe algorithm ejiri na usoro okike na-enye ohere iitatingomi omume nke ihe omumu ihe okike na-eke ihe ndi ozo na-adighi nma, nweta ihe ndi ozo na-adighi nma. Ejiri ụdị teknụzụ 3D gosipụta onwe ha. N'agba nke ikpeazụ, a na-eji mpempe ọla ahụ na ọla aka, na-egbu maramara ma rụchaa ya na nkọwapụta zuru ezu.
Aha oru ngo : Phenotype 002, Aha ndị na-emepụta ya : Maciej Nisztuk, Aha onye ahịa : In Silico.
Mbọsị Ụka 29 Ọgọọst 2021
Site na usoro, algorithmic na parametric imewe
Catzz Pusi Bed Satọdee 18 Septemba
Perception Kafe Fraịdee 17 Septemba
Poise Oriọna Tebụl A Na-Agbanwe Agbanwe Tọọzdee 16 Septemba
Ọgọọst 2021 (93)
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Satọdee 18 Septemba
Chepụta akụkọ mgbe ochie Fraịdee 17 Septemba
Nhazi nke ubochi Tọọzdee 16 Septemba
Onye rụrụ ụbọchị Wenezdee 15 Septemba
Otu mmebe nke ụbọchị Tiuzdee 14 Septemba
Mgbaaka Maciej Nisztuk Phenotype 002